Shiinaha 36W Germicidal UV light jeermiska guriga Soo saaraha iyo Badeecada | Kanfur
1. Halbeegyada ilayska jeermiska UV
Waxqabadka: Waqtiga seddex-garsoor (15min, 30min, 60min), dib u dhigis xawaare iyo hago fog fog.
Cabbirka: 14 * 14 * 44 (CM)
2.Waa maxay farsamada UV?
Iftiinka Ultra-Violet (UV) waa mid aan indhaha aadanaha arki karin wuxuuna u qaybsan yahay UV-A, UV-B iyo UV-C.
UV-C waxaa laga helaa inta u dhexeysa 100-280 nm. Jaantuska waxaa lagu arki karaa in tallaalka jeermiska lagu qiyaasay 265 nm iyadoo laga dhimayo labada dhinacba. Nalalka UV-C ee cadaadiska yar waxay leeyihiin wasakhda ugu weyn ee 254 nm halkaas oo ficilka ku saabsan DNA uu yahay 85% qiimaha ugu sarreeya iyo 80% ee qalooca IES. Natiijo ahaan, nalalkayaga jeermiska ayaa si aad ah waxtar ugu leh burburinta DNA-da ee noolaha yaryar. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan iyagu soo saari karin oo ay sababi karaan cudur4.
Nooleyaasha yaryar ee iska caabinta waxtarka leh ee iftiinka UV aad ayey u kala duwan yihiin. Intaa waxaa dheer, deegaanka noolaha yar-yar wuxuu si weyn u saameeyaa qiyaasta shucaaca ee loogu baahan yahay burburkiisa.
3.Maxay yihiin faa iidooyinka Siraajiyada UV-C ee Germicidal?
Ozone iyo Ozone bilaash ah, Remote Powered
Iftiinka 'Germicidal UVC' wuxuu dilaa fayrasyada oo wuxuu nadiifiyaa hawada. Iftiinkeena UVC sidoo kale laambado badan oo UVC ah ayaa sidoo kale soo saara ozone, waxay xaqiijin kartaa nadiifinta wareega oo dhan
Laydhka UVC wuxuu kaloo la yimaadaa kumbuyuutar wireless ah si loo kordhiyo sahlanaanta isticmaalka iyo badbaadada.
Hawlgalka gacanta waa ikhtiyaari. Adoo gujinaya badhan, dusha sare ee Apollo ama meel fog oo nabdoon - bakteeriyada, jeermiska, iyo fayraskuba lama hawl gelin.
Si fudud u riix batoonka korontada ama u isticmaal masaafada meel fog oo nabdoon iftiinka Germicidal UVC wuxuu bilaabaa inuu carqaladeeyo DNA-da iyo RNA ee cudurada keena waxayna lumiyaan firfircoonaantii iyo shaqadii. Way fududahay in la isticmaalo, waa sida sixirka oo kale.
Hore: 36W Portable 254nm Ozone UVv laambad jeermiska
Xiga: Naqshad cusub 35W UV nalka jeermiska loogu talagalay nadiifinta gudaha
nadiifinta aaladda gacanta ee UV
laambada nadiifinta ee ultraviolet
laambad jeermiska ukunta
uv laambad jeermis guriga loogu talagalay
cusbitaalada jeermiska dila jeermiska
36W / 60W UV laambadda jeermiska leh wireless wireless saar ...